Translate Myanmar (Burmese) to Shona | Multilang.space
translate Myanmar (Burmese) to Shona, Myanmar (Burmese) to Shona translations, Myanmar (Burmese) to Shona Google Translate ,
မင်္ဂလာပါ, နေကောင်းလား Mhoro wakadii
မည်သူမဆိုရှိပါသလား? Pane munhu here?
ငါသည်သင်တို့ကိုတကယ်အရမ်းချစ်ကြ Ndinokudai chaizvoizvo
ဒီဟမ်ဘာဂါဘယ်လောက်ကုန်ကျသလဲ, Iko mari yebhamburger inodhura zvakadini?
သငျသညျအကြှနျုပျကိုတက္ကစီခေါ်ခြင်းနိုင်သလား? Unogona here kundidana tekisi?
ကျွန်တော်စိတ်မကောင်းပါဘူး Ndine hurombo
ငါစိတ်ဝင်စားဖြစ်ကြောင်းကို Ndiri kufarira
အကြှနျုပျ၏လေယာဉ်ခရီးစဉ်နှောင့်နှေးခဲ့သညျ Kuenda kwangu kwakanonoka
ငါစီးပွားရေးလုပ်ငန်းဒီမှာဖြစ်ကြောင်းကို Ini ndiri pano nokuda kwebhizimisi
မင်္ဂလာပါ, ငါ၏နာမဖြစ်ပါသည် Sawa, zita rangu ndere
ငါစိတ်မကောင်းပါဘူး, ဒါပေမယ့်ငါလက်ထပ်ဖြစ်ကြောင်းကို Ndine urombo, asi ndakaroorwa
ငါသည်သင်တို့ကိုမမေးချင်ပါတယ် Ndinoda kukubvunza
သငျသညျလေဆိပ်ကိုငါ့ကိုယူနိုင်သလား? Unogona kunditora kuenda kunhandare yendege here?
ညာဘက်ယခုအချိန်ကိုအဘယျသို့ ကျေးဇူးပြု. ပါသလဲ Nguva yakadini ikozvino, tapota?
အနီးဆုံးရဲစခန်းဘယ်မှာပါလဲ? Ndepi iri mapurisa ari pedyo?
ငါသည်သင်တို့၏ဖုန်းကို charger ကိုကျေးဇူးပြုပြီးချေးနိုင်သလား? Ndingakwereta faira yako yefoni chinyorwa here?
ကျွန်တော့်ကိုကူညီပေးလို့ရမလား? Unga ndibatsira here?
ငါ့ကိုသောက်စရာအမိန့်, ကျေးဇူးပြု. ? Nditenderei ini ndimwe, ndapota?
ဒါဘယ်လောက်ကုန်ကျလဲ? Zvinodhura zvakadini?
ငါ gluten မှမတည့်ဘူး Ndine allergiki kune gluten
ဆရာဝန်ခေါ်ပါ Dana chiremba
ဆရာဝန်တစ်ဦးရှိပါသလော Pane chiremba here?
ငါဖုန်းခေါ်ရနိုင်မလား? Ndingave nefoni here?
ငါ့ကိုသင့်ရဲ့သူဌေးကို ကျေးဇူးပြု. ခေါ်ဆိုပါ။ Nditumire ini mutenzi wako ndapota.
ဤအရပ်ဌာနကိုအလွန်ကောင်းတဲ့ဖြစ်ပါသည် Iyi nzvimbo yakanaka kwazvo
ဟိုတယ်မှငါ့ကိုကျေးဇူးပြုပြီးယူပါ Nditorei kuhotera ndapota
အခန်းထဲမှာအရေအတွက်ကဘာလဲ? Chii changu nhamba yangu yekamuri?